Saadaasha neerfaha dhimirka – Mind Forum
Hem>Lär dig mer>Fakta>Saadaasha neerfaha dhimirka
Halkan waxa ku yaala xogta dhowr Saadaasha neerfaha dhimirka ee ka tirsan DSM-5, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed. DSM-5 waa qalabka cabbiraadda ee dhakhtarrada maskaxdu isticmaalaan markay sameynayaan saadaadha cudurka.
Sida ku xusan darafka saadasha Caafimaadka Dhimirka, waxaa jira xaggo ku saabsan saadaalaha kale ee aan aheyn saadaasha neerfaha dhimirka.
Waxaad sidoo kale helaysaa xogta xaaladaha ku saabsan iyo fikradaha laga yaabo inaaney shuruud gaara laheyn laakin saameyn kara caafimaadka dhimirka. Xaaladha ku lugta leh waxay tusaale ahaan noqon karaan xadgudub, murugo iyo xaaladaha adag.